Fandehanana any Inde: manana tolotra miavaka ny Air Mauritius | NewsMada
Fandehanana any Inde: manana tolotra miavaka ny Air Mauritius
Tanjona ho an’ny Air Mauritius ny hitondra fiovana sy fampandrosoana hatrany, amin’ny tolotra omeny ny mpanjifany. Nampahafantarina, omaly teny amin’ny masoivohon’i Inde eny Tsaralalana, ireo tolotra mahakasika ny fandehanana any Inde. Ny firenena indianina sy ny Air Mauritius izay efa niara-niasa hatramin’izay. Fanamafisana izany indrindra izao fikarakaraka fitsangantsanganana any Inde izao na ny “Tourism Promotion to India”. “Tsy vao izao no nisy ny fiaraha-miasa amin’ny firenena indianina, amin’ny fisian’ny fitsangantsanganana any an-toerana fa efa fanao, saingy hatsaraina sy havaozina hatrany izany, hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa”, araka ny nambaran-dRamarolahy Maeva, tomponandraikitra ny varotra eo anivon’ny Air Mauritius.
Misy ny tolotra manokana, amin’izao fotoana izao, ho an’ny fitsangantsanganana any Inde, araka ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny Air Mauritius, ho an’ny sidina mankany Mumbai, mankany Delhi, mankany Chennai ary mankany Bengalore. Ho an’i Mumbai, misy sidina miisa dimy isaky ny herinandro, manomboka amin’ny 2 343 700 Ar ny sarany ho an’ny sokajin’olon-tsotra ary 7 630 700 Ar kosa ho an’ny sokajin’ny mpandraharaha. Ankoatra izay, misy ihany koa ny sidina makany Delhi, manodidina ny 3 062 700 Ar ho an’ny olon-tsotra ary 10 040 100 Ar kosa ny mpandraharaha. Tsy latsa-danja amin’izany ny sidina mankany Chennai, 3 569 400 Ar ny olon-tsotra, 10 639 800 Ar ny mpandraharaha. Eo ihany koa ny mankany Bengalore amin’ny sarany 3 599 700 Ar ny olon-tsotra ary 10 670 100 Ar ny mpandraharaha.
Misy ihany koa ny tolotra manokana “Air Mauritius holidays” ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa. Hahazo ny anjarany ireo mpivady vao avy nanorin-tokantrano amin’ilay tolotra “Champagne”, efa eo an-dalam-pamolavolana azy ny Air Mauritius.